Kukarukureta pamusoro welded simbi masitepisi ane bowstring kunzvenganzvenga
Kukarukureta pezvikwiriso vane simbi bowstring kunzvenganzvenga
Kukarukureta netwumatanda masitepisi nzvenga simbi bowstring
Kukarukureta resimbi pamasitepisi bowstring kugadzirwa pamwe kunzvenganzvenga.
Pakusarudza Kwenhamba senyere Profile nokuda tambo.
The angled pamusoro zvaidiwa masitepisi.
Area mumatanho zvinhu.
Zvinotarisirwa kuti hwomutambarakede masitepisi.